संविधान – Himalaya Television
सरकारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा : ‘नेपालमा संविधान छ र ?’ (भिडियो कुराकानीसहित)
२२ असोज २०७८ काठमाडौं । आज मन्त्री हुनेहरुको नाम हेर्दा प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबन्डा खोजेको भन्दै आएका समाचार सत्य सावित भएका छन् । यसबारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ? भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई सोधेका छौँ–
‘हरेक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउने हक’ संविधानकाे धारामा मात्रै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)
१३ असोज २०७८ काठमाडौं । नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकले सहजै स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्ने हो । तर देशको मूल कानूनमै व्यवस्था भएको स्वास्थ्य उपचारको हक, संविधानको धारामा...
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई प्रश्नः हाम्रो संविधान कुन शक्तिबाट ‘थ्रेट’मा छ? (भिडियो कुराकानीसहित)
३ असोज २०७८ काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुभएका पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्न दलहरुलाई सुझाव दिनुभएको छ । पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिले संविधानलाई असफल पार्न खोजेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो–
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सन्तोषजनक छ ? संविधानविद् यसो भन्छन् ? (भिडियो कुराकानीसहित)
३ असोज २०७८ काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित रुपमा कार्यान्वन हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ ? कार्यान्वयन सन्तोषजनक छ त ? यस विषयमा हामीले संविधानविद् खिमलाल देवकोटासँग कुराकानी गरेका छौँ–
३ असोज २०७८ काठमाडौं । मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको माग लामो समयदेखि राख्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेर भर्खरै गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाएको छ...
विश्वकै राम्राे भनिएकाे संविधानमाथि किन पटकपटक प्रश्न उठ्ने गर्छ ?(भिडियो रिपोर्टसहित)
३ असोज २०७८ काठमाडौं । संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको स्वीकार्यतालाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । विश्वकै राम्रो भनिएको संविधानमाथि किन पटकपटक प्रश्न उठ्ने गर्छ ? संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दशकौं लामो अपेक्षालाई पूर्णता दिने...
सुवास नेम्वाङलाई प्रश्न- संविधान सर्वस्वीकार्य भयो ? (भिडियो कुराकानीसहित)
३ असोज २०७८ काठमाडौं । संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ । यस विषयमा हामीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग कुरा गरेका छौं–
संविधानका बारेमा लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री के भन्छन् ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
३ असोज २०७८ काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संविधान पालनामा केही चुनौती आए पनि राष्ट्र सही बाटोमा अगाडि बढिरहेको दाबी गर्नुभएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा बुटवलमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले संविधानको पूर्ण पालना र संवर्द्धनका...
नागरिक भन्छन्– जनतालाई होइन, नेतालाई सर्वोच्च बनाउन रहेछ संविधान ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
३ असोज २०७८ काठमाडौं । सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा भव्य कार्यक्रम भइरहँदा बाहिर आम नागरिक भने निराश देखिन्थे । बाहिरबाटै संविधान दिवसको कार्यक्रम नियालिरहेका उनीहरुको एउटै स्वर थियो, संविधान जनतालाई सर्वोच्च बनाउन होइन, नेता सर्वोच्च बन्नका लागि रहेछ...
३ असोज २०७८ काठमाडौं । नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको बताउनुभएको छ । आज सातौँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेकपा(एमाले)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको बताउनुभएको हो...